Vaovao - fanodinana latina CNC fitotoana ny toetra mampiavaka azy
Ny fanodinana latina CNC dia mitoto ny toetra mampiavaka azy
Ny fanodinana latina CNC dia mitoto ny toetra mampiavaka azy:
Ny herinaratra fitaratra dia avo. Fitotoana kodiarana mifandraika amin'ny workpiece ho an'ny fihodinan'ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha, matetika ny hafainganam-pandehan'ny kodia dia mahatratra 35m / s, manodidina ny 20 heny ny fitaovana mahazatra, ny masinina dia afaka mahazo tahan'ny fanesorana vy lehibe kokoa. Miaraka amin'ny fampivoarana ny fikolokoloana teknolojia vaovao, ny herin'ny fikolokoloana dia mandroso bebe kokoa, amin'ny dingana sasany dia nanolo ny fihodinana, ny fikosoham-bary, ny planina, mivantana avy amin'ny fanodinana henjana.
2.Can hahazo fandeferana milina avo lenta ary fahamendrehana ambany tokoa. Ny fanapahana voamadinika tsirairay dia manify ny sosona puce dia manify, matetika dia misy microns maro, noho izany ny fijery dia mety hahazoana marimarina sy avo ambany. Matetika mahitsy hatramin'ny IT6 ~ IT7, ny fahamendrehana amin'ny tany dia mahatratra hatramin'ny08-0.051xm; fitotoana avo lenta azo tratrarina avo kokoa.
3.Manapaka herinaratra dia lehibe, mandany angovo betsaka. Ny kodiarana fikosoham-bary dia misy lathes CNC maratra marobe, ny fizarana voamadinika manoto ao anaty kodiarana dia mikorontana, manapaka ny ankamaroany amin'ny zoro fikororohana ratsy (-15 '- 85'), ary ny tendrony dia misy boriborintany Arc, ary noho izany dia lehibe ny herinaratra fanapahana, mandany angovo betsaka ny milina.
4.Fanapahan-toerana fanodinana. Ny fikikisana kodiarana dia manana hamafin'ny hafanana, fitoniana amin'ny hafanana, tsy vitan'ny fanodinana vy tsy vy mafy, vy vy sy metaly tsy ferrous ary fitaovana hafa, fa koa afaka manodina vy mihamafy, ny karazana fitaovana fanapahana ary ny fitaovana milina mafy toy ny avo akora mafy.
5.Fifanarahana avo. Ny fanoloana ny rindrambaiko fampiharana dia azo soloina mora foana ao anatin'ny faritra iray manomboka amin'ny fanodinana ampahany iray ka hatramin'ny fanodinana ampahany hafa, izay mampihena be ny fotoana fanovana ny fitaovana sy ny fotoana fanomanana ny famokarana.
6.Fenoy ny asan'ny milina sy ny fizotran'ny mandeha ho azy.
Wuxi Lead Precision Machines Co., Ltd dia manolotra ny mpanjifa amin'ny habe rehetra amin'ny serivisy fanamboarana vy vita amin'ny fomba manokana miaraka amin'ny fizotrany miavaka.